Ngaba uyazi ukuba kunamalungu angaphezu kwe-120,000 amalungu e-Screen Actors? Ngaba ufuna ukuphuhlisa ibhishini lokubonisa, kodwa ungazi ukuba ungaphi ? Ubomi bakho bonke, abantu bakuxelele ukuba uzalwe ukuba ngumdlali, ngoku ufumana ithuba lokukwenza ngokwenene.
Kukho izinto ezininzi ozimele uzibuze ngaphambi kokuba wenze izigqibo:
Unayo italente ekhethekileyo: Ngaba ucula okanye udansa?
Uhlobo luni lokusebenza ofuna ukuluphandela: I-TV, ifilimu okanye isigaba?
Ngaba ulungele ukwamkelwa?
Ngaba ulungele ukwamukela iLOT yokugatywa?
Ngaba uzimisele ukuzinikezela ekusebenzeni, kungakhathaliseki ukuba kuthatha iminyaka emininzi?
Xa uSarah Michelle Gellar wayeneminyaka emine ubudala, wafunyanwa yi-agent ngelixa esitya kwindawo yokutyela. Nangona ezi zinto zenzeke, zinqabile kakhulu. Uninzi lwabalandeli bachitha iminyaka behlonipha i-craft yabo kwaye beya kubaphicothi-zincwadi ngaphambi kokuba bafumane ikhefu elikhulu.
Qala ngeCandelo lokuBamba
Unokulingwa ukuba ungene kwinkqubo yokuphicothwa, kodwa ukuba ungumqali ongenakho uqeqesho, into enokuyenza yifumana iklasi ephathekayo . Kungakhathaliseki ukuba ucinga ukuba ungubani, into yokugqibela ofuna ukuba uqalise uphicotho-zincwadi ngaphandle kokwazi oko ukwenzayo.
Abaninzi abadlali baye bachitha iminyaka yokuqeqesha ukuba bafanele ngokwaneleyo kwiindawo ezincinci. Ukwenza umsebenzi obuninzi njengetalente kunye neeklasi kukuvumela ukuba uzilungiselele ubuchule bakho.
Ukongeza kokuya kwiiklasi zokusebenza kunye / okanye kwiindibano zocweyo, kuya kufuneka ufumane ezinye iintloko ezenziwe kwaye uqale ukulungiselela iphothifoliyo.
I zakhono zoLwakhiwo
Xa usulungele ukuphicothwa, jonga ukujonga ukuba ummandla wakho unemidlalo yaseshashalazini kwaye ulandele i-gig yakho yokuqala. Kulapho ungabonisana nabanye abalingisi bendawo, wakhe uluntu lwakho kunye nenkxaso yenkqubo, kwaye ufunde kumava abo.
Kufuneka ujonge kwakhona ukufumana umsebenzi njengento eyongezelelweyo. Oku kuya kunika ukuqonda okungcono indlela umboniso we-TV okanye i-movie ezenziwe ngayo.
Ukuba uhlala kufuphi nomzi omkhulu, khangela ukuba ubone iifilimu ezizayo. I-Central Casting yindawo enkulu yokufumana iincwadi zokuphicothwa kwemisebenzi kwiindawo ezisemgangathweni kwindawo yaseNew York naseLos Angeles.
Kukho inani elikhulu lewebhusayithi ezinikezela ukuphicothwa kwamaphepha kunye nokuphonsa iifowuni. Ininzi yale mihlaba ihlawula umrhumo wokujonga uluhlu, ngoko kukufumana iwebhusayithi ethembekileyo yinto yokulinga kunye nephutha.
Ngexesha elithile ekuqaleni komsebenzi wakho, kuya kufuneka ujoyine i-Screen Actors Guild (SAG) kunye / okanye i-American Federation ye-Television kunye ne-Radio Artists (AFTRA).
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ukuzikhumbula kukuba ukufunda le mveliso akupheli. Kwaye abadlali abaye bazuza iindima kwiimiboniso ezinkulu zethelevishini baqhubeka befunda kubalingani babo. Musa ukuthabatha ulwazi lwakho kwaye uhlale uvulekile kwiziphakamiso.
Inhlanhla enoba u-Edie Falco okanye uHugh Laurie olandelayo!
Vula iiMifanekiso, ziqhubekile
Ukubonakala kwiNkwenkwezi: Spencer Morgan
Iiminyaniso zeBhayibhile zamaxesha amanzima
Uluhlu lweeNdidi ezili-10 zeeLidi, iiLiquids kunye neeGesi
Indlela yokwenza 'iBunny Hop'
Izinto Ezi-10 Ongazi Ngayo Ntabeni Rushmore
Ngaba 'Ndingabonakalisa Ukuba' Kufuna Ukudibanisa?
Isenzi + Iimpawu zokuqulunqwa
Ukulungisa okanye ukufaka iWiring Wiring
I-Lambda kunye neGamma njengeCacined in Sociology
Iingcebiso ezi-5 zokunceda uMfundi ongenakulungelelaniswa
I-SpongeBob SquarePants: A Bonisa Ukubuyiselwa kwabazali
Iifomo ze-Woolly: I-Outlook yokuqala ye-Weather Weather Outlook